URobert Ranalli, i-Esq - i-NJ ne-NY Real Estate, i-phenate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli be-Bankruptcy
Ikhaya / Amalungu Ethimba/ URobert Ranalli, u-Esq
URobert Ranalli, u-Esq
[Email protected],	I-Tel: 844-533-3367
Yini eyenza Ummeli Omuhle?
Ngikholwa ukuthi ukuba ngummeli omuhle kuqala ngokuba umuntu olungile. Kunendlela ethile eseceleni kombhede futhi nenhliziyo enhle enabantu eyakha isisekelo sokumelwa okuhle. E-PSCLaw, ngithemba ukuthi ngizohlinzeka ngamakhasimende isipiliyoni esihluke ngokuphelele kunanoma yini abebengezwa ngayo ngenye indlela. Ukuhlala eTexas ngasikhathi engangibonisa sona, njengengane yeJersey City, uhlangothi oluhlukile embonini yezinsizakalo. Ukukhulela endaweni eshesha kangaka ehambisanayo kungadala izimo zengqondo, futhi lezo zimo zengqondo zikhula zibe zimbi futhi zikhathale. Kwangijabulisa ukusebenza nokufunda nokukhula endaweni lapho abantu babephatha abanye njengabalinganayo kuqala, futhi ngazama ukusiza ukunciphisa imithwalo ababebalekele kuyo.
Ngithole iziqu eStevens Institute of Technology e2014 nge-Philosophy and History undergraduate degree, nge-honors, kanye ne-masters degree kwiTekhnoloji, inqubomgomo, kanye ne-Ethics. Ngaphandle kokuba ngumfundi, imisebenzi yami yayihlanganisa nokuba yi-wrestler, ilungu le-Pre-Law Society, iRedShift Creative Magazine, iCAL (College of Arts and Letters) Blogger, kanye nomuntu osebenza naye (ovela eMnyangweni Wezemidlalo ukuze enze ucwaningo umsizi). Lapho ngithola iziqu, ngathuthela eSan Antonio, eTexas futhi ngaqala isikole sezomthetho eSt Mary's University.
Ngenkathi ngiseSt. Mary's, ngasebenza nommeli ozimele owasebenza kwezokuvikela ubugebengu futhi ngasebenza emtatsheni wezincwadi wezomthetho. Okuhlangenwe nakho njengomqeqeshi osemthethweni kwangisiza ukulungiselela ukungilolonga ngezindlela ezibaluleke kakhulu kunokumane nje ngilungiselele futhi ngifake izinsimbi zomthetho, njengoba ummeli engiphatha njengomngane, futhi wasebenza njengomeluleki wami.
Ngemuva kokuphothula esikoleni sezomthetho, ngalungiselela futhi ngathatha i-Uniform Bar Exam ngoFebhuwari 2018 ngabuyela emuva E-New Jersey ngo-Agasti. Selokhu ngibuyile, ngijoyine uPatel, uSoltis, noCardenas, LLC. njengendlela yokuqhubekisela phambili izintshisekelo zami njengommeli ekumeleni abantu abalungile ngokwethembeka.
Izindawo Zokusebenza Komkhakha:
Ukubonisana kwamahhala okutholakala:
JD - St. Mary's
MA - I-Stevens Institute of Technology - Ubuchwepheshe, inqubomgomo, kanye nokuziphatha
BA - IStevens Institute of Technology - Izifundo zefilosofi nomlando weziqu zabafundi, kanye nodumo
U-Ansul Jatan Bhuta
I-copyright © 2019 nguPhatel & Soltis, LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe.